Mkpagbu nke Kraịst na Nigeria | Apg29
Mkpagbu nke Kraịst na Nigeria
Ihe mere na Kraịst na-akpagbu na Naijiria Islamist mmegbu.
Karịsịa na iri na abụọ na-ekwu, ke edere edere Nigeria ebe iwu Sharia iwu enwe Mmeri gbochiri Ndị Kraịst ndị ọchịchị si bi okwukwe ha.
The ikwa nke iri na otu Kraịst
Nso nso a, m dere banyere igbu ọchụ nke iri na otu Kraịst na ama ebe on Christmas Day 2019. Otu n'ime ha gbara na ndị ọzọ na iri halvshöggs . Isiokwu nwere oge e dere nwere ihe karịrị 5600 nkewa na Facebook. Ikwa e rụrụ site Boko Haram, nke dị n'okpuru islam esiteghi na ala na Nigeria.
E nwere 195,9 nde mmadụ na Nigeria nke ọnụ ọgụgụ nke ndị Kraịst bụ 91.100.000. Nigeria okpukpe bụ Islam na Christianity. The Iwu System bụ a Federal Republic.
Nke a pụtara ìhè karịsịa na Nigeria ugwu akụkụ, ebe Islam bụ akara ererimbot ke ata okpukpe, mgbe Christianity bụ kpagburuibe n'ebe ndịda. The ịma aka dị n'etiti agbụrụ dị iche iche na n'ebe ugwu na n'ebe ndịda Gosinụ na mkpagbu nke ndị Kraịst.
Mkpagbu na Nigeria
Ọtụtụ Ndị Kraịst nọ na n'ebe ndịda nke mba ahụ, na-nnwere onwe okpukpe ha, ma Ndị Kraịst nọ na n'ebe ugwu na eriri na-doro ime ihe ike site na Islamist iche iche.
Ime ihe ike a na-eme na ọnwụ ma ndụ ma onwunwe, nakwa dị ka anụ ahụ mebiri. Dị ka a n'ihi nke ime ihe ike na-Kraịst chụpụrụ n'ala ha, si otú adịkwa ha Livelihoods.
Kraịst nọ n'ebe ugwu Nigeria, karịsịa na Sharia na-ekwu, hụrụ ka nke abụọ na klas ndị amaala, n'ihu ịkpa site na otu.
Kraịst si a Muslim ndabere na-eche ihu ojuju site na ha onwe ha na ezinụlọ na nsogbu na-ahapụ Kraịst.
Ihe Nlereanya nke Muslim mkpagbu nke ndị Kraịst
Na mbuso agha na a Christian obodo nta dị na February 2018 gburu 106 ndị mmadụ. Boko Haram bụ n'azụ agha, nke e kpọmkwem megide ndị na obodo nta.
Nchụàjà abụọ na iri na asaa na-efe e gburu mgbe a Catholic chọọchị nsogbu site fulaniherdar n'oge a usenubọk ofufe utom na April 2018. Mgbe agha nyere Raiders na obodo na-boo 60 ụlọ n'ala mgbe ọ zuuru ha.
Na June 2018 gburu 120 Kraịst nke fulaniherdar. The metụtara bụ ndị na ha si a olili ozu mgbe ha na-agha. The ụka na-enweghị ofufe ụbọchị n'ihi egwu n'ihu ọgụ.
On Christmas Day 2019 gburu iri na otu Kraịst site beheading na égbè.
Mepee ụzọ .